Waaridka Soomaaliyeed oo walac ka muujiyey Magafayaasha Caaruurta soomaaliyeed ku jir dila Wadanka Libia. | Sahan radio
Magafayaashii Carabta ee Tahriibayaasha Soomaalidda ku qabsan jiray wadanka Liibiya ayaa imika la soo baxay qorshayaal ay ciddii hore lacagta uga waayaan ku samaynayaan si degdeg u hellaan lacagta ka doonayaan.
Manaxayaasha loo yaqaan magafayaasha dadka tahriibayaasha ah ku qabsaday Liibiya ayaa qorshe cusub oo dadka laga raajiyo lacagta ay ka doonayaan ama loo soo diri waaya intay xarig iyo fik ku tagaan oo muuqaalna ka duubaan soo dhiga baraha internetka si soomaalidda aragta uga gargaxaan,isla markaana lacagtii ay rabeen uga helaan.
Qorshahan cusub ee dadka laga argagixinayo,isla markaana shaabuug iyo jidh dil la iskugu darayo qofka tahriibayaa ayaa walaac badan ku abuurtay eheladda iyo dadka kale damiirkoodda nool yahay, waxanay maalmihii dambeeyey laga hadal hayey baraha bulshadda ee Soomaaliddu aadka u isticmaasho.
Dadkan magafayaashu ku haystaan Liibiya ee muuqaaladda laga naxayo laga soo duubay ayaa si arxan daran loo garaacayaa, isla markaaana eheladdii uu ka soo jeeday qofkaasi la garaacaya iyo soomaalidda kaleba uur ku taallo ku reebtay in Ilmahoodii oo inta la xidh xidhay shaabuug nin xoog weyn oo carab ahi la dhacayo wakhti lagu jiro Ramaadaan.
“Waan soomanahay waxaana I haysta shaabuugaasi iyo garaacis ee eeddo lacagta uu iga doonayo iga soo bixi”sidaas waxa ku barooranaysay hooyo inta la xidh xidhay la figeeyey uu nin shaabuug la dhacayo oo uu leeyahay keen lacag, waxaanay fariintaasi u diraysay wiil ay eddo u tahay oo ay baryeysay inuu jidh dilkaasi ka badbaadiyo oo uu lacagta laga rabo usoo diro.